Inistiityuutichi kitaabolee miiliyoona 3 ol onlaayiniin gurmeessera – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Inistiityuutichi kitaabolee miiliyoona 3 ol onlaayiniin gurmeessera
On Mar 16, 2020 59
Finfinnee, Bitootessa 7, 2012 (FBC) – Inistityuutiin Innooveeshinii fi Teeknooloojii kitaabole miiliyoona 3 ol onlaayiniin gurmeessuu danda’eera.
Ministirri Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dooktar Injiinar Abrahaam Balaayii fi hoggantoonni hojii olaanoon ministeerichaa sochii hojii inistiityuutichaa daawwataniiru.
Insitiityuutichi sirna bulchiinsa konkolaachiftootaa, itti fayyadama imeeylii dhaabbilee, sirna bulchiinsa waraqaa eenyummaa fi baajii hojjettootaa, sirna qindoomina bulchiinsa geejibaa, sirna bulchiinsa barnoota olaanoo fi sirnoota biroorratti appilikeeshinii diriirsuu fi guddisuu beeksiseera.
Kanarra darbees odeeffannoowwan abbummaan kennameef, dhimmoota seeraa, barnoota olaanoo, dhimmoota biroo kan of keessatti qabate miiliyoona 3 fi kuma 37 fi 443 onlayiniin fayyadamtoota biraan ga’uu daayreektarri olaanaan inistiityuutichaa obboo Saanduukaan Dabbabaa himaniiruu.
Odeeffaannoon biyyaalessaa innooveeshiinii qoratamee xumurramun yeroo dhiyo asitti akka ifoomu ragaan ministeericharraa arganne ni muul’dhisa.
Oromiyaatti wiirtuleen laaboraatoorii qorannaa vaayrasii koroonaa hojii jalqabuufi
Laabraatooronni guyyaatti samuudaa vaayrasii koroonaa 400 qorachuu danda’an…
Gareen ittisaa fi to’annoo vaayrasii koroonaa teeknooloojidhaan dabaalamu…
Ejansiin Odeeffannoo fi Nageenyaa Ityoophiyaa “Ityoophiyaatti siistema vaayrasii…
Finfinneetti sochiin idilee hin dhaabbatu jedhame
Oromiyaatti wiirtuleen laaboraatoorii qorannaa vaayrasii…
Laabraatooronni guyyaatti samuudaa vaayrasii koroonaa 400…
Gareen ittisaa fi to’annoo vaayrasii koroonaa…
Oduu biyya keessaa1279